Fitifirana ny G2 Rado : NITORY NY HAVANY -
AccueilRaharaham-pirenenaFitifirana ny G2 Rado : NITORY NY HAVANY
12/01/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mivoatra isan’ora ny raharaha manodidina ny fitifirana ny G2 Rado tany Ambatomanohina. Nametraka fitoriana teny anivon’ny Fitsarana mantsy ny fianakavian’ity zandary namoy ny ainy ity, ankoatra ny fitoriana efa napetrak’ilay vadintany etsy amin’ny polisin’Ambohidahy sy ny mety ho fitoriana hafa momba ny hosoka sy ny fampiasana hosoka izay efa tsy azo lavina intsony ny fisiany.
Tsy tokony hisahana ny fanadihadiana ity raharaha iray ity intsony ny Zandarimariam-pirenena noho ny fitanilana mibaribary eo amin’ireo tompon’andraikitra ambony. Tsy azo antoka intsony koa izay ho vokatry ny fanadihadiana mivoaka eo ary na ireo vavolombelona aza mety tsy hanana saina tony intsony mandritra ny fakana am-bavany noho ny tahotra. Efa niharan’ny fampihorohoroana mafy avy tamin’ireo zandary nitifitra ny G2 Rado tokoa mantsy ireo vavolombelona (nasaina niboridana, teny mahery miharo fandrahonana, sns) talohan’ny niakaran’izy ireo teto an-drenivohitra. Na ireny fanambarana nataon’ireo tompon’andraikitra ambony teo anivon’ny Zandarimaria ireny fotsiny aza dia efa endrika fampihorohoroana ireo vavolombelona tokony hiatrika fakana am-bavany ao anatin’ny filaminan-tsaina. Mbola tsy miatrika ny fanadihadiana sy fakana am-bavany akory anefa izy ireo dia efa tsy homena izay fitonian-tsaina izay.
Voalaza koa fa nanao irony famerenana ny zava-nitranga (reconstitution) irony ny Zandarimaria avy etsy Ankadilalana. Tsy natrehan’ny rehetra voakasika amin’ity raharaha ity anefa izany noho ny antony tsy fantatra. Mazava ho azy fa tsy hahazo ny fahatokisan’ny rehetra io famerenana ny zava-nitranga nataon’ny Zandarimaria io, izany hoe, tsy hitondra ho any amin’ny fikarohana ny marina. Etsy an-danin’izany, ilay vadintany voalaza anarana ho niaraka tamin’izy ireo tany Ambatomanohina dia efa nanambara fa tsy tany ary tsy nanao sonia taratasy, tsy vitan’izany fa nametraka fitoriana mihitsy. Na izay fotsiny aza dia efa azo ilazana fa mandringa daholo izay zavatra ataon’ny Zandarimaria manodidina ity raharaha ity.
Efa tsy mipetraka intsony koa moa amin’ity raharaha ity ny antsoina hoe tsiambaratelon’ny famotorana vokatr’ireny fanambarana mialohan’ny fanadihadiana miampanga avy hatrany nataon’ireo tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny Zandarimaria ireny.
Mpitatitra – Sendikan’ny CUA : Mitaky ny fialan’ny Ben’ny tanànan’Antananarivo
Mihenjana ny tady eo amin’ny Fikamban’ny mpitatitra ahitana ny avy amin’ny FTAR (taxi) sy ny UCTU (taksibe), ny eo anivon’ny Sendikan’ny CUA misy ny SMKAR, sy ny Kaominina Antananarivo- Renivohitra (CUA). Araka ny daty efa ...Tohiny
Filoha Rajaonarimampianina Hery : “ Gadrao, faizo ireo mpampakatra vidim-bary ”
Fitondram-panjakana : « Misokatra amin’ny antokom-pivavahana rehetra »
Bileta tokana : Tonga ny andiany voalohany
Kick boxing – Fantomas II : Lasan’i Naval sy Fahendrena ny « Grand Prix »